Nanambara ny mpiasa iray natao fanadihadiana fa mandeha toro izy ireo no miasa nanomboka tamin’ny Alatsinainy lasa teo. Efa tsy misy rahateo ny asa ka izay ihany koa no antony tsy maintsy nandraisan’ireo tompona orinasa fanapahan-kevitra araka ny nambarany. Ho maro indray ireo tanora no tsy maintsy very asa satria iaraha-mahita ny fahamaroan’ireny orinasa Call Center ireny eto amin’ny firenena. Saika hita ao avokoa ireo tanora vao nahazo ny diplôma Bacc no miakatra. Ho mafy ny fifehezana ny krizy arak’asa. Nisy ny fanambarana nataon’ny Minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola, Richard Randriamandranto ny amin’ny fanampiana ireo sehatra tena voa mafy saingy mbola tsy voatonona tao aloha ny orinasa Call Center izay mampiasa tanora Malagasy an’arivony. Ireo hotely sy ireo Agence de Voyage ary ireo hafa ny mpisehatra amin’ny fizahantany no hisitraka fanampiana ary efa misy drafitra hoy ny minisitra saingy mbola miandry ny fanohanana.